people Nepal » स्वास्थ्य स्वास्थ्य – Page 43 – people Nepal
14:15:11 | मनोरञ्जन स्वास्थ्य , Purna Nanda Joshi
सामान्य त धेरै जसो मान्छेहरु रातको समयमा यौन सम्पर्क गर्न रुचाउँछन । नेपाली समाज र ब्यस्त दैनिकिले गर्द पनि साझ सुत्ने बेला मात्र सेक्स गर्ने धेरैको बानी छ । यौन सम्पर्क गर्ने महतवपूर्ण समय भनेको अधिकांशका लागि रातको एकान्त समय नै हो । हरेक प्राणीमा यौनेच्छाको चाहना हुनु शास्वत सत्य हो । यो प्रकृतिले दिएको […]
लामो समयसम्म शारीरिक सम्बन्ध नराखेमा शरीरमा यस्ता खतरनाक असर देखापर्ने
सेक्स एउटा त्यस्तो शब्द हो जसको बारेमा सोच्ने बित्तिकै दिमागमा बेग्लै किसिमको बिजुली दौडिने गर्दछ। जसरी शरीर स्वस्थ्य राख्न पोषिलो खानेकुरा,व्यायामको आवश्यकता पर्दछ त्यसैगरी सहबासको पनि महत्त्पूर्ण भूमिका हुन्छ। धेरैजसो मानिस सहबासलाई त्यति जरुरी मान्दैनन् तर आज हामी तपाइलाई एउटा नयाँ कुराको बारेमा जानकारी गराउदैछौ कि, सहबास नगर्नाले शरीरमा कस्तो असर पर्दछ ? जान्नुहोस। – […]
| स्वास्थ्य , Purna Nanda Joshi
काठमाडौं– त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको चिकित्सक टोली एक महिलाको पेटबाट ३५ किलोको ट्युमर निकाली उपचार गर्न सफल भएको छ । रामेछाप गोठगाउँकी ४२ वर्षीया दिलमाया सार्कीको पेटको बडेमानको ट्युमर शल्यक्रिया गरी चिकित्सकहरूले निकालेका हुन् । दुई साताअघि ट्युमर निकालेपछि दिलमाया स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त हुँदै आएकाले उपचारमासंलग्न चिकित्सकको समूहले शल्यक्रियाबारे जानकारी दिएको हो । चिकित्सकहरूका अनुुसार कुनै […]
18:07:11 | स्वास्थ्य , Purna Nanda Joshi
बजारमा आँप छ्याप्छ्याप्ति देखिन थालेका छन् । आँपलाई स्वाद र स्वास्थ्यका दृष्टिले ‘फलको राजा’ भन्ने गरिन्छ । एउटा आँपमा ८६.१ प्रतिशत पानी, ६.६ प्रतिशत प्रोटिन, ०.१ प्रतिशत चिल्लोपदार्थ, ०.३ प्रतिशत खनिज लवण, ११.८ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, १.१ प्रतिशत फाइबर (रेशा), ०.०१ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट र ०.०२ प्रतिशत फोस्फोरस पाइन्छ । एउटा पाकेको १०० ग्राम आँपमा ५० देखि […]
डा. अमृता गिरी, स्त्रीरोग तथा प्रसुति विशेषज्ञ, नर्भिक अस्पताल २०७४ असार विवाहित दम्पत्तीले सन्तानको तयारी गर्नुअघि योजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो समाजमा गर्भवती भएपछि एकैपटक डाक्टरकोमा जँचाउन जाने चलन छ । तर, सन्तानको योजना बनाउनुअघि नै दम्पतीहरु चिकित्सकको परामर्शमा आउनु राम्रो हो । सहरी क्षेत्रकै जनमानसमा पनि यसबारे त्यत्ति सचेतना देखिँदैन । बिनातयारी गर्भवती हुँदा […]
शल्यक्रियाअघि बेहोस बनाउने डाक्टरलाई भेट्नु कति जरुरी
डा. विदुरकुमार बराल २०७४ असार २३ गरिमालाई (नाम परिर्वतन) असाध्यै पेट दुख्यो र उनी अस्पताल गइन्। उनको सबै जाँच भयो। पेटको भिडियो एक्स–रे पनि गरियो। उनको पित्तथैलीमा ढुंगा भएको कुरा पत्ता लाग्यो र चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सल्लाह दिए। त्यसपछि उनले शल्यचिकित्सकलाई भेटिन् र सम्पूर्ण रिपोर्ट देखाइन्। शल्यचिकित्सकले पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने कुरा नै बताए। उनी […]
15:32:48 | स्वास्थ्य , Purna Nanda Joshi
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ । […]
जाडाेमा यौनाङ्गकाे सरसफाइ कसरी गर्ने ?
अहिले पनि अधिकांश मानिसहरु यौन र यौनागंको विषयमा खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन् । शरीरको निके संवेदनशील मानिने यौनाङ्गका बारेमा सोच्नु पनि नराम्रो मानिन्नछ हाम्रो समाजमा । तर जति नै यसको विषयमा मानिसहरु लजालु बन्दै जान समस्याहरु उतिनै बढ्दै जान्छन् । अझ यौनाङ्गको सरसफाई झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । अधिकांश मानिसहरुले यौनाङ्गको सरसफाई भन्दा बयस्कहरुको मात्र भन्ने […]
यौनक्षमता बढाउने तरिका
तनावरहित हुनुस्ः तनाव भुलाउन सेक्स गर्ने होइन, सेक्स गर्नुअघि तनाव विसर्जन गर्ने गर्नुस् । जागिर, व्यापार, घरायसीलगायत विभिन्न कुरा मनमा खेलाएर सेक्समा डुब्न सक्नुहुन्न । तनाव लिँदा शरीरमा कोर्टिसोलजस्ता हर्मोन उत्सर्जन हुन्छ, जसले यौन हर्मोनलाई निस्तेज गरिदिन्छ र यौनक्रीडा चाहेजस्तो हुँदैन । चिल्लो कम खानुस् ःचिल्लोचाप्लो खाने कुरा खाने गर्दा शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ । जर्नल […]
शारिरिक सम्पर्क गर्न आवश्यक तरिका, १८ वर्ष माथिकोले मात्र यो हेर्नुहोस!
17:14:05 | मनोरञ्जन स्वास्थ्य , Purna Nanda Joshi
स्त्री–पुरुष आपसमा नजर जुध्न थालेपछि स्त्रीमाडर र संकोच हटेर जान थाल्छ र उनी विस्तारें–विस्तारै निर्धक्क रुपमाहाँस्ने, ठट्टा गर्न थाल्ने छिन् । आँखाको भावद्वारा उनको चेतना मनमा कामभावनाका तरङ्गहरु उत्पन्न हुन थाल्छन् । स्तारैकुनै बहाना बनाएर उनका हात समाउने चेष्टा गर्नु पर्दछ यसबेला उनकोमुखाकृतिमा कस्ता भाव उत्पन्न हुन्छ यसलाई पुरुषले धेरै विचार गर्नु पर्दछ ।उनी हाँसिन् […]